China pearlescent mica ntụ ntụ ụlọ ọrụ na ndị na-eweta ngwaahịa | Huajing
Huajing pearlecent mica ntụ ntụ bụ nke ahọpụtara ahọpụtara mica wafers nke dị iche na nke fluorophlogopite. N'ihi na ọ bụ mica synthetic ọhụrụ site na iji Huajing usoro pụrụ iche na akụrụngwa mmepụta iji mepụta.
Pearl Grade mica ntụ ntụ
Ihe Esịtidem nkọwa agba ọcha (Lablọ nyocha) urughuru size D90 (μm) urughuru size D50 (μm) urughuru size D10 ()m) Ntinye
-15 -15μm Na-acha ọcha 98 12 ～ 15 5 ～ 7 2 ～ 4 Siver usoro
5 ～ 25 5-25μm Na-acha ọcha 98 22 ～ 25 10 ～ 13 5 ～ 7 Usoro ọla ọcha
10 ～ 40 10-40μm Na-acha ọcha 98 40 ～ 42 21 ～ 24 10 ～ 12 Usoro ọla ọcha Usoro anwansi Chameleon Usoro
10 ～ 60 10-60m Na-acha ọcha 98 49 ～ 52 25 ～ 28 12 ～ 14 Usoro ọla ọcha Usoro anwansi Chameleon Usoro
20-120 20-120μm Na-acha ọcha 98 108 ～ 113 58 ～ 60 25 ～ 27 Usoro ọla ọcha
40 ～ 200 40-200μm Na-acha ọcha 98 192 ～ 203 107 ～ 110 49 ～ 52 Usoro anwansi Chameleon Usoro
60 ～ 300 60-300μm Na-acha ọcha 98 290 ～ 302 160 ～ 165 73 ～ 76 Usoro anwansi Chameleon Usoro
Okpomọkụ na-eguzogide agba Ike nke Mohs olu resistivity elu mgbochi (Ω) Ebe mgbaze ọkpọ ọkpọ Cha ọcha Ihulata
Ọ nwere njirimara nke fluorine dị nro, uzo na ala dị ala. Wafers n'aka nke ya gafere usoro mmepụta ndị a: nhọrọ pụrụ iche, nhicha nke cyclic, iji nlezianya egweri, patent ultrasonic nhazi ọkwa na obere ihicha ala. .Nke ikpeazụ mica ntụ ntụ nwere uru nke edo urughuru size, zuru okè wafer Ọdịdị na ibu elu dayameta ọkpụrụkpụ. Huajing sịntetik mica ntụ ntụ bụ nhọrọ kacha mma maka pearl pigmenti crystal series, magica series na chameleon series.
Na mgbakwunye, Huajing synthetic mica niile ahaziri dị ka ndị ahịa chọrọ, nha ahụ sitere na 10 ～ 900μm.
Gịnị Bụ Atọ Main Categories Of Pearlescent Pigments?
Industrial pearlescent pigments, ịchọ mma pearlescent pigments, nri ọkwa pearlescent pigments
Peeji Nkume nke Industrial Pearlescent
Agba ndị bara ọgaranya nke ukwuu, gụnyere: oge ​​gboo mmetụta pements, crystal pearlescent mmetụta pigments, acha aluminum metal mmetụta pigments, elu arụmọrụ pearlescent mmetụta pigments, multi-agba pearlescent mmetụta pigments, mmiri mmiri metal pearlescent mmetụta pigments, yi iko pearlescent mmetụta pigments, wdg ., nke a na-ejikarị na mkpuchi, plastik, mbipụta, iko na ceramik.
Iji gboo mkpa nke ahịa ahụ, anyị na-achọ imeziwanye ihe ndị ahịa na-eme na mmepe arụmọrụ nke nrụpụta pearlescent pigments iji nyere ndị mmepe pearlescent pigment aka idozi nsogbu dị iche iche na ngwa ahịa. Dị ka: inye aka ịzụlite ọkwa dị iche iche nke mmetụta pearlescent na-eguzogide ihu igwe, na-edozi ọnọdụ siri ike nke na-eche ihu mkpuchi ụgbọ ala na plastik n'èzí; uzuzu-free pearlescent mmetụta pigments dozie nsogbu nke ájá mmetọ na dispersion na sedimentation nke pearlescent pigments na-ebi akwụkwọ ink; mgbochi-acha odo odo pearlescent pigments dozie nsogbu nke darkroom yellowing na anyanwụ yellowing na plastik The pụrụ iche ink usoro ọgwụgwọ usoro osobo mkpa nke elu mmepụta na elu ink mgbakwunye na mmepụta nke plastic agba masterbatch.
Iji nkà anyị nwere na mmepụta nke mica sịntetik, anyị na-aga n'ihu ịmepe mpaghara ọhụụ nke ngwa pigmenti. Dịka ọmụmaatụ, ngwaahịa ngwa ngwa dị elu na-eme ka pigments na-anwale ule nke okpomọkụ dị elu na iko na seramiiki ma na-ejigide agba nke agba pigments.
Ngosiputa Ngwa Peallescent
Na-aga n'ihu mmepe nke ntecha ụlọ ọrụ, mmetụta na udidi nke ngwaahịa ada site pearlescent pigments na-na-na-na-na ndị ọzọ dị oké mkpa. A na-eji ihe ndị na-acha uhie uhie na-acha odo odo ma ọ bụ dị nro dị ka satin-luster, ma ọ bụ na-enwu gbaa dị ka diamonds. Iji nwekwuo mma nke ngwaahịa ndị a, ngwaahịa ndị na-elekọta onwe ha malitekwara iji pearlescent pigments iji meziwanye ọdịdị nke ngwaahịa ahụ ma ọ bụ mepụta mmetụta ozugbo nke ngwaahịa ahụ.
Pearlescent pigments eji na rụpụta nke ntecha ga-igba ogwu na elu okpomọkụ na dum mmepụta ahịrị ga-aseptic.
A na-eji ya emepụta ọlaọcha dị elu na ọlaọcha na-enweghị isi na pearlescent, nke nwere ike ọ bụghị naanị ịgbakwunye ọkụ na nsonaazụ na ngwaahịa ahụ, kamakwa jiri amamihe wepụta ọkụ iji mepụta agba pearlescent dị iche iche site na iji ụkpụrụ nnyonye anya.
Ejiri ya na mmepụta nke ogwumagala, nke a na-ese dị ka ogwumagala, site n'akụkụ dị iche iche ị na-elele, ị nwere ike ịhụ mgbanwe nke agba agba
Food mezuwo Pearlescent ink
Ihe a na-akpọ nri na-atọ ụtọ juputara na agba na ekpomeekpo, ahụmịhe ọhụụ dị oke ọnụ na-esokwa oge mara mma. Tinye na ngwaahịa gị
Pearl mmetụta pigments, si ọlaọcha, gold na nnyonye anya mmetụta, na-acha uhie uhie na aja aja-aj u ike vivid agba na dara oké ọnụ luster, ka na-enweta na-egbuke egbuke nri ọnụ! Nyochaa ụwa nke mica na-eri nri ọnụ!
Nke gara aga: Lọ ọrụ na-arụpụta ihe maka Muscovite na ihe egwuregwu na-adịghị egbu egbu na-adịghị egbu mgbu - Calcined mica powder - Huajing
Mica Dabere Pearlescent ink